January 8, 2021 - Khitalin Media
January 8, 2021 by Khitalin Media
အချိန်က ည ၉နာရီခွဲမှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် အံ့အားသင့်ပြီး ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ် မန္တလေးမြို့ . . အချိန်က ည ၉နာရီခွဲ မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်း အချိန်က ည ၉ နာရီခွဲခါနီး။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အထင်ကရလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ ကားကိုဖြေးဖြေးမှန်မှန်မောင်းလာရင်း ကားရှေ့ လမ်းမီးရောင်အောက်မှာ ကိုယ်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကို ကြည့်ပြီး အံ့အားသင့်မိတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဘာကွာလတီမှမပါပဲ ထုတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်အစုတ်ပေါ်မှာ ဧရာမအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်။ ထိုအထုပ်ရဲ့အပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်ထိုင်လို့ ။ ကိုယ်တေ်ာ်တော်လေး အံ့သြတကြီးကိုငေးကြည့်မိတယ်။ ဘယ်လောက် အန္တရာယ်များလိုက်သလဲ။ ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ ဘီး ၂ ဘီးပေါ်မှာ ဟန်ချက်နဲ့ထိန်းပြီး လမ်းပေါ်သွားနေတာလေ။ ပြုတ်ကျတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်ကယ်လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့။ ဆိုင်ကယ်ကလဲ ဖြေးဖြေးပဲမောင်းနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကားက သူတို့ကိုကျော်တက်နိုင်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ … Read more
ခြေဖဝါး ကွဲ သူများ အတွက်အမြန်ဆုံး ပျောက်စေ မည့် နည်း လမ်း
ရာသီဥတုပူပြင်းခြင်း၊အေးလွန်းခြင်းနှင့်ခြေထောက်မှ ခြေဆီမပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် ခြေဖဝါးနာခြင်း၊ကွဲခြင်းတို့ဖြစ် တတ်ကြပါသည်။အကျိုးဆက်က ဖိနပ်လည်းမစီးနိုင် သလို လမ်းလည်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တော့ချေ။ အိမ်တွင်းသုံးကုထုံးနည်းလေးဖြင့် ယုံယုံကြည်ကြည်စမ်း သပ်ကြည့်ပါ အံ့ဖွယ်သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည် နည်းလမ်းလေးမှာ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်တွင် ခြေထောက်ကိုသန့်စင်အောင်ဆေးပြီး မန်ကျည်းမှည့်အနှစ်အနည်းငယ်နှင့် ကွမ်းရွက်အနည်းငယ်ကို ကြိတ်ပြီး ခြေဖဝါးကွဲဒဏ်ရာအားသုတ်လိမ်းပေးပါ။ သက်သာပျောက် ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသောမြန်မာနည်းလေးဖြစ်ပါသည်။) လိုသူတို့သုံး စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေ..။ ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုင်) ဆောင်းတွင်းမှာ ခြေဖနောင့်ကွဲခြင်းကို ကာကွယ် ကုသရန် နိုဝင်ဘာလကုန်ရင် ခရစ္စမတ်ရာသီထဲလည်း ဝင်တော့မယ်။ ဆောင်းရာသီလို ရာသီဥတု အေးတဲ့အချိန်မှာ အရေပြားဆဲလ်သေတွေ ဖနောင့်မှာစုပုံပြီး ဖနောင့်ကွဲတတ်ပါတယ်။ဖနောင့်ကွဲတဲ့အခါ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားရတဲ့အပြင် အသားမာကြီးတက်ပြီး ခြေထောက်အလှကို ပျက်ဆီးစေနိုင်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေဆို တစ်ကိုယ်လုံးလန်းအောင် ဘယ်လောက်ပြင်ထား၊ ပြင်ထား…ခြေညှပ်ဖိနပ် စီးမိတဲ့နေ့မှာ ခြေဖနောင့်က အက်ကွဲနေရင် အလှပျက်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ ဖနောင့်ကွဲခြင်းကို ကုစားနိုင်တဲ့ သဘာဝကုထုံးလေး … Read more
“အမြိုးသမီးတှေ အသကျရလာရငျ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ အရိုးပှရောဂါကို ဒီနညျးလမျးတှနေဲ့ ကာကှယျထားပါ
“အမြိုးသမီးတှေ အသကျရလာရငျ ဖွဈလရှေိ့တဲ့ အရိုးပှရောဂါကို ဒီနညျးလမျးတှနေဲ့ ကာကှယျထားပါ” ခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံ အရရော၊ သဘာဝအရပါ အမြိုးသမီးတှဟော အသကျကွီးလာရငျ အမြိုးသားတှထေကျ အရိုးပါး အရိုးပှရောဂါ ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ …. အရိုးပါး အရိုးပှ ရောဂါဖွဈလာရငျ ကုသရ ခကျခဲတာကွောငျ့ မဖွဈခငျ ကွိုတငျကာကှယျထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ပြိုမတေို့ ကိုယျတိုငျလညျး ဖတျသငျ့ပွီး မမေတေို့ကိုလညျး ဒီနညျးအတိုငျး ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ပေးလိုကျပါနျော …. ။ (1) ဆားစားသုံးမှုကို လြှော့ခပြါ တဈနတေ့ာ အစားအသောကျထဲမှာ ဆားပမာဏ မြားလှနျးတာက အရိုးဆဲလျတှကေို တိုကျရိုကျသကျရောကျမှု ဖွဈစပွေီး အရိုးပါး အရိုးပှတာကို စောစောစီးစီး ကွုံတှလေ့ာနိုငျပါတယျ … ။ (2) ပရိုတငျးနဲ့ ကယျလျစီယံကို လုံလောကျအောငျစားပါ ပရိုတငျးဓာတျက အရိုးသိပျသညျးမှု … Read more
ဇာတ်တော်ထဲက မိန်းမပျက် အင်္ဂါရပ် (၂၅)ရပ် ပြည့်တန်ဆာတူတဲ့ မိန်းမဆိုတာ…
ဇာတ်တော်ထဲက မိန်းမပျက် အင်္ဂါရပ် (၂၅)ရပ် ပြည့်တန်ဆာတူတဲ့ မိန်းမဆိုတာ မိန်းမပျက်အင်္ဂါ ၂၅ ချက် ၁။ လင်ယောက်ျား အရပ်တစ်ပါးသွားတာကို ချီးမွမ်းတတ်ခြင်း။ ၂။ အရပ်ဝေးသွားသော လင်ယောက်ျားအား အမှတ်မရတတ်ခြင်း။ ၃။ လင်ပြန်ရောက်လာသည်ကို မနှစ်သက်ခြင်း။ ၄။ လင်ယောက်ျား ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့အောင် ပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ၅။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် ချီးမွမ်းစကား မပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ၆။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် အကျိုးမဲ့ကိုသာ ပြုတတ်ခြင်း။ ၇။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် အကျိုးရှိသည်ကို မပြုတတ်ခြင်း ၈။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် ပြုလုပ်ပေးရမည့်တာဝန်ကို မပြုလုပ်ပေးခြင်း။ ၉။ လင်ယောက်ျားအပေါ်တွင် မပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အမှုများသာ ပြုလုပ်ပေးခြင်း။ ၁၀။ အဝတ်ကို မြဲစွာဝတ်၍ အိပ်တတ်ခြင်း။ ၁၁။ လင်ကို ကျောပေးအိပ်ခြင်း။ ၁၂။ ကပြောင်းကပြန် အိပ်တတ်ခြင်း။ ၁၃။ … Read more
ကှမျးယာဆိုငျမြား အတှကျ အရမျးစားကောငျးပါတယျ ဆိုတဲ့ ထုံးဖောကျနညျးလေး
ကှမျးယာဆိုငျမြား အတှကျ အရမျးစားကောငျးပါတယျ ဆိုတဲ့ ထုံးဖောကျနညျးလေး ထုံးဖောကျနညျး အသဈလေးပါ ထုံးကွမျးကို အခြိနျ၁ဝ ဝယျပါ ပွီးရငျ ရထေညျ့ပါ ကြောကျခဉျြ ၁ဝသားထညျ့ပါ ထုံးမခဲစရေနျဇာပှငျ့ပွုတျရညျထညျ့ပေးပါ အဖတျမထညျ့ရပါဘူး စဉျအိုးကို မွထေဲမွှပျ့ပွီးဖောကျထားပါတယျမွကွေီးရဲ့ အပူဓာတျကွောငျ့ ထုံးသားနူးညံ့ပွီး အရမျးစားကောငျးပါတယျရှငျ… သူငယျခငျြး တှအေတှကျ ကြှနျမအကိုရဲ့ ဖောကျနညျးလေးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျရှငျ…။ YadiKyaw ကွမ်းယာဆိုင်များ အတွက် အရမ်းစားကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ ထုံးဖောက်နည်းလေး ထုံးဖောက်နည်း အသစ်လေးပါ ထုံးကြမ်းကို အချိန်၁ဝ ဝယ်ပါ ပြီးရင် ရေထည့်ပါ ကျောက်ချဉ် ၁ဝသားထည့်ပါ ထုံးမခဲစေရန်ဇာပွင့်ပြုတ်ရည်ထည့်ပေးပါ အဖတ်မထည့်ရပါဘူး စဉ်အိုးကို မြေထဲမြှပ့်ပြီးဖောက်ထားပါတယ်မြေကြီးရဲ့ အပူဓာတ်ကြောင့် ထုံးသားနူးညံ့ပြီး အရမ်းစားကောင်းပါတယ်ရှင်… သူငယ်ချင်း တွေအတွက် ကျွန်မအကိုရဲ့ ဖောက်နည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…။ YadiKyaw
မိန်းကလေးတွေက လူပျိုထက် ဘာလို့ များအိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းကို စွဲလမ်းမိတာဘာကြောင့်လဲ….
( ၁ )လူပျိုတွေထက် အိမ် ထောင်သည်ယောကျာ်းကပိုစီးပွားရှာနိုင်တယ်ထင်လို့ လား တကယ်က စီးပွားရှာနိုင်တယ်မရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်းစီအရည်အချင်းနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် ။လူပျိုထက် စီးပွားရှာနိုင်အားနည်းလို့ မိသားစုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒီတော့တွေးရမှာက အပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုမက်မောစွဲလမ်းတာက သူ့ ကိုရေများများလောင်း (ငွေများများပေး)လို့ ဖြစ်နိုင်တယ် ။ မပေးနိုင်တဲ့ နေ့ ကော … အဲ့ ဒီ့ အိမ်ထောင်သည်ကြီးကို ခွာမှာလားဒါဆို စဉ်းစားဖို့ လိုပါပြီ ။အမိဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမသိသူမသိတဲ့ပြည့်တန်ဆာဘ၀ထဲသွပ်သွင်းနေတာပါ ။ ပိုက်ဆံရလို့ ကပ်တယ်ဆိုကတည်းက အဲ့ မိန်းမက ပြည့်တန်ဆာပဲ ပြည့်တန်ဆာသည်သာငွေကြေးအလို့ ငှာ ယောကျာ်းတွေနဲ့ ပလူးပရောနေတာပါ ။ (၂ )လူပျိုတွေထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းက ပိုပြီးချောတယ်ခန့် ညားတယ် ထင်လို … Read more
မိန်းကလေးတွေ အတွက်ကတော့အထူးဖတ်သင့်ပါတယ် စာဖတ်တာက ပျင်းစရာမဟူတ်ပါဘူး ဖတ်သင့်တဲ့စာကို ဖတ်ပါ
မိန်းခလေးတွေ သေချာဖတ်ပါ ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေး တစ်ယောက်မြတ်မြတ်နိုးနိုး နဲ့အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ။ မခူးရက်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေသလို မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ဟာသတစ်ပုဒ် လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ၊ ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတာတွေက ပါသေးတယ်။ သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ ပုဝါလိုမျိုး အရင်လူနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကို တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းလို တန်ဖိုးထားနေလည်း အလကားပဲဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့ ဒီလိုခေတ်ထဲမှာ မိန်းမဖြစ်ရတာ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲ…ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုအပ်တာကိုပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်တယ်။တမင်ယုတ်မာတဲ့သူတွေက အချစ်ဆိုတာကို အသုံးချပြီး ကိုယ်လို ချင်တာကို ရအောင်ယူတယ်၊ ကတိတွေပေးတယ်ေ မျှာ်လင့်ချက်တွေ ပေးတယ်၊တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့အနာဂတ်တွေကို အိပ်မက်တွေပေးပြီး စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နေတာ။ပြည့်တန်ဆာနဲ့ အိပ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေက မယုတ်မာဘူး၊တန်ရာတန်ကြေးပေးပြီး သူတို့လိုအပ်တာကို ဝယ်တာ၊ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီး အတူအိပ်ချင်ကြတဲ့ယောက်ျားတွေ ကတော့ပိုပြီး … Read more
အိမ်မှာ အလွယ်တကူရှိတဲ့ ဂျင်းကိုသုံးပြီး ဆံပင်ရှည်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
ဂျင်းဆိုတာ အိမ်တိုင်းလိုလိုရဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ မဖြစ်မနေ ရှိလေ့ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ ဆေးပညာရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂျင်းက ဆေးဖက်ဝင်သလို အလှအပေရေးရာနဲ့ ပတ်သတ်လာရင်လည်း ဂျင်းကို အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းက ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေတယ် ၊ ဗောက်ပျောက်စေတယ် ၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေတယ် ၊ အာဟာရပြည့်ဝစေတယ်။ ဂျင်းကို အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပြီး ပျိုမေတို့ရဲ့ ဆံပင်ရှည်အောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဂျင်း နဲ့ အုန်းဆီ ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ဂျင်းအနှစ် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ၊ အုန်းဆီ (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ။ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး ကြိတ်ချေပေးရင် အနှစ်ရလာပါမယ်။ရလာတဲ့အနှစ် (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) စာ နဲ့ အုန်းဆီ … Read more
ဘယျနားသှားသှားထငျးခနဲလှပစဖေို့နဲ့ ဘာလေးဝတျဝတျလှနစေဖေို့ အသားဖွူခငျြလိုကျတာလို့ဆိုပွီး တှေးနတေဲ့သူလေးတှမြေားရှိလား။ အသားဖွူခငျြပမေယျ့ ထိခိုကျမှုနညျးစဖေို့အတှကျ သဘာဝနညျးလေးတှပေဲသုံးခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီဆောငျးပါးလေးက လိုခငျြနတေဲ့အဖွကေို ထုတျပေးနိုငျမှာပါ။ ကဲ..အသားဖွူဖို့ အသငျ့ဖွဈပွီလား………… သဘာဝအတိုငျး အသားဖွူစဖေို့ အိမျတှငျးကုထုံးတှကေ ဘာတှမြေားလဲ…………. မွငျသူတိုငျးအားကရြလောကျအောငျ အသားလေးဖွူဝငျးစဖေို့ဆိုရငျ သင်ျဘောသီး နဲ့ ပြားရညျ သင်ျဘောသီးက အရသာရှိရုံတငျမဟုတျပါဘူး။ အသားအရအေတှကျပါ တျောတျောလေးအထောကျအကူပွုပေးပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ သင်ျဘောမှာပါတဲ့ papain ဆိုတဲ့ဒွပျပေါငျး နဲ့ alpha hydroxy acids တို့ကအရပွေားပျေါက ဆဲလျသတှေကေို အထိရောကျဆုံးဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။ အရပွေားအတှငျးပိုငျးလှာအထိသနျ့စငျစပွေီး အသားအရကေိုကွညျလငျဖွူဝငျးစပေါတယျ။ ပြားရညျကတော့ အနာကကျြစပွေီး အမာရှတျတှကေိုပါးစနေိုငျသလို ဘကျတီးရီးယားတှကေို အထိရောကျဆုံးကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ လိုအပျမှာကသင်ျဘောသီးတဈစိတျစာ ပြားရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးစာတို့ကို ရောစပျပွီး သမအောငျမှပေါ။ ရလာတဲ့အနှဈကို မကျြနှာအပါအဝငျခန်ဓာကိုယျအနှံ့မှာလူးပွီး မိနဈ ၂၀ လောကျထားပါ။ ပွီးရငျ … Read more
သင်ကကော ဘာနေ့နံလဲ ဖတ်ကြည့်နော်…နေ့(၇) နေ့ နဲ့ သူတို့အကြောင်း…
သင်ကကောဘာနေ့နံလဲ ဖတ်ကြည့်နော်…နေ့(၇) နေ့ နဲ့ သူတို့အကြောင်း…. တနင်္ဂနွေ သားသမီး တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း ပေမဲ့… အခြားလူ တွေနဲ့ ကွဲပါးတဲ့ စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထား သူတွေပါ… ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ အခြား လူတွေနဲ့ ကွဲပါးနေတတ် ကြပါတယ်… တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေဟာ စာဖတ် ဝါသနာ ပါကြတယ်… ဗဟုသုတကို လိုက်စားတယ်… အအိပ်မက် တယ် အစားမကြီးဘူး… ဒါပေမဲ့ ခဏ ခဏ စားနေတတ် တာမျိုး… ဒေါသကြီးပေမဲ့ ကောက်ရိုးမီး လိုမျိုး… ခဏပဲ…. ပြီးရင် သူမဟုတ် သလိုမျိုး… စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် လွယ်တယ်…. ဒါပေမဲ့ စိတ်ပြေလွယ် တယ်.. ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ဟာ ချစ်စရာ … Read more